မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးဟာလေ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ပြန်ခေါ်ဖို့ကျတော့လည်း ဒီလောက်ထိ စိတ်ကိုတင်း ထားလာပြီးကာမှ လျှော့လည်းမလျှော့ချင်~နောက်ဆို ငါပဲ အမြဲ အရှုံးပေးရမလား~~ငါပဲ အမြဲ ပြန် စ ခေါ်နေရမယ် ဆိုပြီးတော့😞😞
ခဏစောင့်ကြည့်တဲ့ အထိ သူကလာမပြောဘူး~~ပြီး တော့ ကိုယ်တော်က လိုင်းပေါ် ဆယ်မိနစ်လောက်ပျောက်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ အသည်းတွေယားတာယားတာဆိုတာလေ😒😒 (နောက်မှသူပြန်ပြောတာ သူလည်း စကားစပြောရင်ကောင်းမလား မကောင်းလား ဆို တာ တွေးနေတာတဲ့ ပြီးတော့ ကိုယ် များ လာပြောမလားပေါ့ သူကလည်းစောင့်နေတာ😏😏)
တော်တော်နေနိုင်ပါလား ဟင်!!စကားမပြောရတဲ့ ရက်အတွင်း တော်တော် ပျော်နေတယ်မလား?? ဘယ်တွေသွားသေးလဲ?? Night Out တယ် မလား သူငယ်ချင်းတွေကို မ TAG ခိုင်းတာမလား? နေကောကောင်းတယ်မလား?? နဲ့ မေးတာ ပြောတာ ဆိုတာ သူတောင် ဖြည်းဖြည်းပြောပါလို့ ပြောယူရတဲ့အထိပဲ 😁😁😂😂😝😝
ယောက်င်္ကျားလေးတွေ က အမြဲ အလျှော့ပေးပြီး စ ခေါ်ရတယ် ဆိုတာ အမည်ခံယုံပဲရှိတာ တကယ်တော့ အဲ့ဒီ ပြန် စ ခေါ်တယ်ဆိုတယ်ဆိုတာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မိန်းကလေးကချည်းပဲ ဒိုင်ခံ ဦးဆောင်ရတာ သူတို့က မခေါ်ချင်ခေါ်ချင်ပုံစံတွေ ကိုယ်တွေက အမလေးဟဲ့ ပြန် စခေါ် တယ်ဟဲ့ ဆိုပြီးတော့သာ ကြွေနေတာ~~😔😔😒😒